अकस्मात गृहमन्त्रीले किन बोलाए सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई काठमाडौंमा ? « ABC NEWS NEPAL | No.1 News channel of Nepal
अकस्मात गृहमन्त्रीले किन बोलाए सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीलाई काठमाडौंमा ?
काठमाडौँ, ६ असार । गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले नेपालका सातै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुलाई हिजो अकस्मात काठमाडौँ बोलाउनुभएको छ । ती मन्त्रीहरु आजै बिहान काठमाडौँ आइपुगे र अहिले गृहमन्त्री अधिकारी र ती सात मन्त्रीहरको बैठक सिंहदरबारमा जारी छ ।
गृहमन्त्री अधिकारीले हिजो ती मन्त्रीहरुलाई बोलाउनुभको थियो । उहाँले सबैलाई आफैले फोन गरेर बैठकका लागि भन्दै बोलाउनुभएको हो । उनीहरु आजै काठमाडौं आएकोले अहिले सिंहदरबारमा बैठक शुरु भएको छ । खासमा उहाँले विपद् ब्यवस्थापनका बारेमा आवश्यक छलफल गर्ने र तयारीका बारेमा केन्द्र सरकारको निर्देशन दिनका लागि ती मन्त्रीहरुलाई काठमाडौँ बोलाएका बुझिएको छ ।
अघि शुरु भएको सो बैठकमा प्रहरी प्रमुख शैलेश थापा क्षेत्री, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेश अधिकारी पनि सहभागी रहेका बुझिएको छ। उता यसअघि गत शुक्रवार मात्र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि शीतल निवासमा बोलाएर गृहमन्त्री अधिकारी र ३ सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफल गर्नुभएको थियो । त्यस लगत्तै हिजो गृहमन्त्री अधिकारीले सबै प्रदेशका आन्तरिक व्यवस्था मन्त्रीहरुलाई बैठकका लागि बोलाउनुभएको थियो । मन्त्री अधिकारीले यो बैठक हालै देशका विभिन्न ठाउँमा आएको बाढी पहिरोको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सहयोग र समन्वयका लागि यो बैठक बोलाएको भनिए पनि निर्वाचन सुरक्षाबारे छलफल गर्न भनेर सबै प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुलाई काठमाडौं बोलाएको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ ७ मा दोस्रो पटक संसद विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गर्नुभएको छ । सरकारले कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि आम निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको छ । हुनत प्रधानमन्त्रीको यस कदमका विरुद्धमा परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर पनि यता सरकारले भने आम निर्वाचनको तयारी गर्ने जनाएको थियो । सरकारले निर्वाचनमा सुरक्षाको सम्भावित अवस्थाका बारेमा आवश्यक छलफल र परामर्श गरिरहेको बताइएको छ । त्यसैले शनिबार गृहमन्त्री अधिकारीले ७ प्रदेशका आन्तरिक मामिलासम्बन्धी मन्त्रीहरुलाई बोलाउनुको उद्देश्य पनि निर्वाचन सुरक्षाका बारेमा छलफलका लागि भएको अनुमान गरिएको छ ।